Ungakuhlanza kanjani ukungcola kothayela phansi - Isazi seZD Floor
Ikhaya > Ungakuhlanza kanjani ukungcola kothayela phansi
Hlela: UDenny　2019-12-12　Iselula
Izindlela ezijwayelekile zokubumba phansi zamathayela phansi:
1. Ukuhlanza nsuku zonke amathayela e-ceramic, ungasebenzisa i-detergent, insipho, njll.
2. Sebenzisa insipho ukufaka ingxube encane ye-ammonia ne-turpentine ukuze uhlanze tile ukuze icwebezeke.
3. Amathayili apolishiwe kufanele avuthwe njalo, ngokuphumula kwezinyanga ezingama-2-3.
4. Uma kukhona imihuzuko phezu kobumba lwezitini, ungafaka amazinyo okuqhekeka bese uyesula ngendwangu eyomile ukuyilungisa.
5. Izikhala eziphakathi kwezitini nezitini zingahlanzwa ngezikhathi nezikhathi ngokunamathisela i-decontamination, bese kufakwa ungqimba lomenzeli wokuvimbela amanzi ezikhaleni ukuvimbela ukukhula kwesikhunta.
I-6, itiye, ikofi, ubhiya, u-ayisikhilimu, igrisi kanye nokunye ukungcola zisebenzisa i-sodium hydroxide noma isixazululo se-potassium bicarbonate.
I-7, uyinki, usimende kanye nokunye ukungcola zisebenzisa izixazululo ze-dilute ezifana ne-hydrochloric acid, i-nitric acid.
8. Sebenzisa izihlanza ezikhethekile zokupenda, zokumboza nokunye ukungcola.
9. Amamaki ashiywe ngemuva kokushiswa kwe-matchstick nephepha angasetshenziswa ngenani elincane le-oxalic acid solution ngesixubho esisetshenzisiwe.
Ungakuhlanza kanjani ukungcola kothayela phansi Okuqukethwe okuhlobene